နိုင်ငံပိုင် မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအား ရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း | Ministry of Planning and Finance
Posted By : paprd_editor, Date : 08.11.2019 comment
၁။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင် လက်ဝယ်ရှိ မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက် စုစုပေါင်း(၂၅)ခုကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ဝယ်ယူလိုသော Lot No. တစ်ခုချင်းအလိုက် သီးခြားအဆိုပြုလွှာ တစ်စောင်စီ တင်သွင်း ရမည်၊ သတ်မှတ်စပေါ်ငွေ P.O Cheque (Payment Order Cheque)အား တင်ဒါတင်သွင်းလွှာ နှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။
၁၃-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၁၂-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ
ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်ရုံး (စီမံကိန်းစိစစ်ရေး နှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ နေပြည်တော်)
စပေါ်ငွေသွင်းရမည့် တန်ဖိုးကို အဆိုပြုလွှာဝယ်ယူသည့် အခါ တစ်ပါတည်း ဖော်ပြပေးပါမည်။
P.O Cheque တင်ပြရမည့်ရက်
၁၆-၁၂-၂၀၁၉၊ ၁၇-၁၂-၂၀၁၉၊ ၁၈-၁၂-၂၀၁၉၊
Lot No. (၁) မှ (၂၅) အထိ နံနက်(၁၀)နာရီမှစ၍ အစဉ်လိုက် လက်ခံပါမည်။
၅။ ဝယ်ယူလိုသည့် မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအား ကြော်ငြာသည့် နေ့မှစ၍ သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဝယ်ယူရန် အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းသည့် အချိန်တွင် ဝယ်ယူမည့် မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက်ဖြင့် ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။
၆။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ရုံးချိန်အတွင်း တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၆၇-၄၀၆၃၃၉ ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည့် မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက် စုစုပေါင်း(၂၅)ခုကို ဤနေရာတွင် Click ၍ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။